Ubomi, kuvela, aluqala kwiminyaka engama-40, kodwa emva kokuqhawula umtshato. Abasetyhini abaninzi, bashiya ngamadoda abo angathembekanga, bakwazi ukuhlela ubomi babo. Ngoko, satshicilele abafazi abaphezulu , apho abadumileyo abaphuma khona. Kwabaninzi balaba bafazi, ukuqhawula umtshato kwakuqala ukuqala utshintsho olutsha ebomini-umntu owakhiwe umsebenzi odibeneyo, umntu wadibana nendoda yamaphupha akhe ...
Ukwahlukana noDmitry Peskov waba ngumkakhe uCatherine kunye nabantwana babo. Ngaloo ndlela, intombi endala endodenikazi uElizabethe ayizange ikholelwe de lokugqibela uyise uyise watshata noTatiana Navka.
Ekhohlo kunye nabantwana abathathu, uCatherine Peskova nje iminyaka emibini wadibana nendoda eyamenza ukuba akholelwe kwakhona ngothando. Kwaye nangona u-Dmitry Peskov owayengumfazi uzama ukuvakalisa ubomi bakhe, akafuni ukufihla uvuyo lwakhe.
Ngoko, kungekudala ibhinqa lipostile umfanekiso wesithandwa kunye no-Andrei Grigoriev wakhe othandekayo, embonisa ngokubalulekileyo:
Ndiyabulela wonk 'ubani, ndiyabonga kubani endikufumanayo ngoku
U-Ekaterina Peskova wala utywala kunye nogwayi
Ubomi bakhe obutsha, uEkaterina Peskova wanquma ukwenza ezinye iinguqulelo. Kuye kwavela ukuba iqabane lomnye waseRussia likhulumela i-spokeswoman for a long time and smoked alcohol.
Ngomhla woNyaka omtsha, uCatherine wagqiba ukushiya imikhwa yakhe embi, awayeyitshilo abafundi bakhe bhilblogging:
... kude kube nguNyaka omtsha kukho iintsuku ezingama-59 ezisele - zanele ukwenza konke okucetywayo kwinyanga ezili-10 ezedlulileyo kwixesha lokutshintshela kwaye ungazive unetyala kunye nokudelela ubuthathaka bakho ngokungazalisekisi izithembiso zakho!) Ukususela kwimpumelelo yam - ukunqoba utywala (inyanga, kuphela emanzini acocekileyo ayiphambukisa yonke iminqweno yokuphazamisa imeko emangalisayo yempilo ngeglasi yamhlophe), phantse ukutshatyalaliswa kokutshaya (inyanga engenakucuba!)
Ngelo xesha, u-Ekaterina Peskova akazange aphelelwe yilali yewayini ekhanyayo yokutya. Ngokuvuma ukuvuma kukaKatyya, isiqingatha sebhotile yamanzi ngosuku:
... kwakunomdla wokuqhuba uvavanyo eParis, apho isigxina sebhotile yewayini ngumntu wonke kumntu wonke :) Kwaye ndandiyithanda)
Ngelo xesha, uCatherine wongezelela ukuba akayi kukuyeka iglasi ye-champagne. Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
Utshutshiso luka-Alla Pugacheva - ukulandelelana kweziganeko zenkcazo yokuqala yo-2017
Intombi eneminyaka engama-9 ubudala ka-Alexei Panin yatsho ngengcali yeengqondo malunga neentlobano zesini zesini
U-Alika Smekhova vumela isandi esimthiyile uTatiana Navka, ividiyo
Umtshato osindelwe ixesha elide lentombi kaValentin Yudashkin
U-Anna Semenovich wayehlekisiwe kwiifoto zeentsimbi ezincitshisiwe
UVictoria Bony waphula kunye no-Alex Smerfit - abalandeli bavusa i-alamu
U-Alla Pugacheva wamangalisa abaphulaphuli be-"Wave Wave" ngemilenze yakhe
Ukunakekelwa kweenyawo: zokupheka kwabantu
Izindlela zokunyanga isikhumba sobuso besikhumba
Umama wanamhlanje: indlela yokugqoka isimboli ngongoma?
Iibhatyi zamabhinqa, ekwindla-ebusika 2009-2010
Masks kwesikhumba sentamo
I-sausage casserole kunye neetamatati kunye neembotyi
Iipulo kunye neepereyiti ezihlambulukileyo
Ngaba indoda ekhitshini iyamangalisa umfazi wayo?
Indlela yokwenza ukuhlaziywa kwezindlu
Iintlanganiso zeKrismesi zika-Alla Pugacheva 2015
Indlela yokukhetha izitya ezifanelekileyo, ipane